Izinqumo Ze-Inthanethi Zonyaka Omusha eziyi-75 | | Martech Zone
NgoMsombuluko, Disemba 20, 2010 NgoLwesithathu, Juni 24, 2015 Douglas Karr
Sekuyisikhathi sokuphela konyaka. Lo nyaka usinikeze okuningi okungaphatheka kabi… ngokuqhubeka nokuphatha izinkampani ezimbalwa ezinkulu kuze kube sekuziphatheni okungamukeleki kwezokuxhumana.
Nazi ezinye izinto ezingiphazamisa ngempela, ngakho-ke ake sizilungise ukuze zingabi khona ngo-2011:
YEKA UKUKHANGABEZANA. Njengoba ulingeka njengoba nawe, gcina iminwe yakho ku-CAPS LOCK.
Uma ngizikhipha ohlwini lwe-imeyili yakho, ungathumeli ifayela le- i-imeyili yokuqinisekisa kimi.
Faka esikhundleni isithombe se- Iqanda ngesithombe sakho sangempela ku-Twitter. Sekuphele izinyanga ezi-3 nama-Tweets ama-2 asevele ekhona.
Ungathumeli iyaqhubeka. Ungenzi ngisho nokuqhubeka. Sike saba nakho LinkedIn iminyaka engu-8 manje, yisebenzise.
Uma ungeke ukwazi ukuyifaka Izinhlamvu ze-140, ngithumele i-imeyili.
Uma ngikwazi ukufunda i-imeyili yakho ku 2 imizuzwana, ngishayele ucingo.
Shiya umyalezo, ngizo imeyili uyabuya.
Ukweqisa! Sibona INDLELA kakhulu ngayo kulezi zinsuku. Kusuka ku- UCarissa Newton.
I-Apple: Invent izikrini lokho akudingi ukusulwa kuhlanzwe noma ukuqala ukubuyisela amakhibhodi kumadivayisi akho.
Yeka ukungithumela i-imeyili ngapha nangapha ngezikhathi zokuthi hlela umhlangano. Sebenzisa my Ihlathi!
Yeka ukusebenzisa izithombe ezindala njengama-avatar, sobabili siyazi ukuthi awusabukeki unjalo. Lapho sihlangana mathupha angizukukwazi noma ngizozibuza ukuthi kungani ngikhuluma noMama womlandeli wami. Kulungile, sengikhuluphele futhi ngimbi manje, nami.
Misa ubuso bedada. Noma nini lapho ubona umngani eyisebenzisa, kufanele ubaklolodele emphakathini. Bazokubonga eminyakeni emi-2 lapho bethola ukuthi babebukeka beyiziphukuphuku kangakanani.
Sawubona Google… ukube ubungaqaphelanga, i- Imboni ye-SEO iyimboni ekhula ngokushesha kakhulu kwezokuMaketha. Lokho kungasho ukuthi kukhona okungahambi kahle nge-algorithm yakho ngoba izinkampani zitshala imali ukuze ziyisebenzise. Yeka ukungakunaki.
Uma uthatha isinqumo sokuvula isitolo sama-geek, qiniseka ukuthi uyisitoko 2XL kuye ku-5XL amahembe. Asizange siyithole le mizimba ku-P90X, siyithole ekubhlogweni.
Yeka ukungingenisa ngemvume kusayithi lakho ukuze zikhiphe ohlwini. Mina nawe sobabili siyazi ukuthi ngilahlekelwe yiphasiwedi eminyakeni engu-4 eyedlule ngenkathi ngibhalisa. Angikaze ngivakashele isiza sakho selokhu - ukuthumela ama-imeyili masonto onke ngeke kukusize.
Othile ngicela enze ifayili le- WYSIWYG umhleli wombhalo lokho kusebenza kahle. Uma i-HTML5 ingangeza ividiyo, kungani singenakuba nesihleli sendabuko?
Yeka ukwenza ukuzibophezela ku-inthanethi ukusiza othile noma ukuphromotha okuthile ngaphandle kokulandela. Kusuka ku- U-Amy Stark.
Sicela utshele i- uhulumeni, noma imuphi uhulumeni, ayeke ukuzama ukuxubana ne-Intanethi. Ukuphela kwento esebenza futhi - ngoba ohulumeni abayithintanga.
Qonda ukuthi uma ubeka isikhangiso phambi kwami ​​nge Yeqa isixhumanisi, ngisanda kweqa isikhangiso futhi ukushicilelwa kwakho.
Yeka ukungitshela nge Uhlelo lokusebenza lwe-iPhone. Akekho onendaba, sonke sine-Droids.
Susa ukupopola, Facebook… kumane nje kuyakhanya.
Yeka ukuhlola izinkampani ku- izigidigidi lapho baneminyaka embalwa ubudala futhi bengenzi ngisho nenzuzo. Akufanele, akekho okufanele ayikhokhe. Futhi uma bekunikeza u- $ 6 billion, ungabi yisilima bese wenqaba lokho okunikezwayo.
Esikhundleni se ukuqasha umuntu ukukhuluma ngokuthi isoftware yakho inkulu kangakanani, senzele umusa sonke futhi silungise isoftware eyingozi kunalokho. Uthole isithombe esihle nomculi ohamba phambili ngemuva, sisazama ukusebenza ngalelo phutha lesikripthi ebelivele lineminyaka engu-4 likhona. Akufanelekile.
Indodakazi yami icele ukuthi ngiyeke ukuphawula ekhasini layo le-Facebook futhi ngisongele abafana abazama ukumshaya. Kuzofanele ngicabange ngakho. Ngicabange ngakho… cha.
Yeka izinkampani zokwahlulela yi-CEO yazo ku iqoqe ama jeans nesigqoko se-cowboy, indawo epholile yehhovisi, ukukhula komsebenzisi, noma imali ye-VC… sesivele sikwenzile lokho kuma-90's futhi akusebenzanga. Qala ukwahlulela izinkampani ngokuthi abasebenzisi bazogxuma kanjani umkhumbi lapho kufika umfana opholile olandelayo egqoke ijean nesigqoko sezinkomo.
Qhubeka uthumele ama-blogger njengami amathoyizi amahhala ngakho-ke singenza ngokuzenzisa, sibalulekile, futhi siqhubeke nokuzichaza ngokuthi abathonya. Ama-iPad amukelekile:
I-120 E Market St, Suite 940
Abanye abantu bayeka ukufunda kwi-Net. Qala i- podcast, yenza a ividiyo… Sebenzisa izindlela ezahlukene ukufinyelela izethameli ezahlukahlukene.
Sesha ochwepheshe - yeka ukutshela wonke umuntu lokho ezenhlalo ziyamunya futhi kufanele basebenzise yonke imali yabo ekufuneni.
Ochwepheshe bezokuxhumana - bayeke ukutshela wonke umuntu lokho ukusesha kuyabheda futhi kufanele basebenzise yonke imali yabo kwezenhlalo.
Iwebhusayithi yakho isebenza ngezinjongo ezintathu: Ukugcinwa, Ukuthengiswa Nokutholwa. Ukhohlwe okungenani eyodwa yazo, angithi?
Inkampani yakho inamahhovisi abiza imali ephindwe kayishumi kunewebhusayithi yakho. Akekho owabuza ukuthi yini i- buyela kutshalomali ubezoba kusofa wesikhumba, uyeke ukubuza nehhovisi lakho eliku-inthanethi. Sebenzisa imali, bheka ubungcweti, uzonakwa kakhulu - ngiyathembisa.
Yekani ukukhuluma ngokuthi mangaki ukubukwa kwamakhasi uthola. Ibhizinisi likalwa ngamadola nangamasenti. Uma ungatholi amakhasimende akhokhelayo, isu lakho liphuliwe.
Misa ukuzama ukuba ngu- # 1 ngegama eliyisihluthulelo elinzima kakhulu lapho kunamakhulu ngaphezulu amagama angukhiye afanele lokho kungashayela ibhizinisi enkampanini yakho.
Yeka ukuzama isikhundla emhlabeni jikelele lapho isisekelo sakho samakhasimende singaphakathi kwamamayela angama-25 ehhovisi lakho. Akekho eMaui onakekela izipesheli zakho zasemini (ngaphandle kokuthi useMaui).
Cha, isicelo osuzotshala kuso ngeke sikwenze konke. Cishe ngeke ize yenze lokho umthengisi athe uzokwenza. Futhi izici ezithembisiwe kufayela le- ukukhishwa okulandelayo? Abafiki, futhi.
Namathela kulokho onethezeke ngakho, qasha ababonisi ngesipiliyoni esifakazelwe ukukusiza ukwazi kahle konke okunye.
Ngicela othile athenge Yahoo! vele ?!
Uma ungithumela i-imeyili nami ungaphenduli, ngicela ungangithumeli i-tweet, umyalezo we-Facebook, umyalezo bese uvula iwindi lokuxoxa nami. Angiphendulanga ngoba ngisebenza kokubalulekile… futhi ubungeyena wabo (namuhla).
Facebook onjiniyela… ungavele ushiye i-interface ethosiwe yodwa amasonto ambalwa. Ngiyacela?
Uhlekisa ngabantu abaya kumaHooter, kepha uzothenga izizinda kusuka GoDaddy? Ngempela?
Uma ungaphezu kwe-Version 1, awukho i-beta futhi. Yeka ukuzama ukunikeza abathuthukisi bakho be-crappy izaba zokukhohlakala okuphukile.
Ukumaketha kwakho okuku-inthanethi akuyona iphrojekthi, kuyisabelomali esidinga ukunakekelwa okuqhubekayo, ukwenza ngcono, nokwenza ngcono. Yengeze kwisabelomali sika-2011 bese uqinisekisa ukuthi uyakwazi ukukala imbuyiselo yotshalomali.
Mhlawumbe awukho kahle social media.
Suka kude nefayela le- Flash. Bekumnandi ngenkathi iqhubeka… ikushiyele kubadwebi bekhathuni nakonjiniyela begeyimu. Konke okunye kufanele kube yi-HTML5, Ajax, ne-CSS. (@simphiwe Ungidlulisele i-athikili enkulu nge I-HTML iqhathaniswa neFlash.)
Yeka ukungihlulela ngokuthi mangaki abalandeli nabalandeli Ngine. Ungishayela amantongomane uzama ukuhambisana.
Uma omunye wama-blogger akho owathandayo, okusizile ukucija ubuciko bakho iminyaka, uphuma ne ibhuku. Hamba uyothenga - kuncane ongakwenza. 😉
Ngabe sonke sihlela ngokungathí sina ukuba khona I-SXSW ukujabulisa futhi ulahlekelwe ukukhiqiza okufanele isonto lonke?
Uma ungumuntu intatheli enkulu, yeka ukusekela i-giant yakho enkulu futhi uphume lapha uzenzele imali yakho yokubhala, ukubika nokuyenza ngaphandle komhleli omdala noma umshicileli odwengula okuqukethwe kwakho. Ukube babekwenza kahle, imboni yabo ibingazukuya ethoyilethi.
Imithombo yezokuxhumana kanye abaxhumanisi bezentengiso online akuwona ama-Amish. Uma ukwazi ukuyikhokhela, bakhokhele… uma ungabuyiseli, baxoshe. Inkomishi yekhofi ethengiselwa iseluleko esizwakalayo ayikhokhi intela.
Ukusebenzisa injini yokusesha kudinga ukuphathwa kwamasayithi, ukuklanywa kwamakhasi, ukwenziwa kokuqukethwe kanye nokuphakanyiswa okungekho esizeni. Uma ungazitholi zonke lezo zinto, awukaqashi ngempela uchwepheshe we-SEO.
Uma wenza ibhizinisi ku social media, unikezela ngendlela ecacile ukuthi inethiwekhi yakho iyithathe ukuze yenze ibhizinisi nawe? (isb. Call to Action, Landing Page, Form, njll.)
u-JUSTIN bieber: Imizuzu yakho engu-15 yodumo yanyuka ezinyangeni eziyi-8 ezedlule. Hamba… futhi uhlanganise izinwele zakho ngendlela efanele.
Ithani labantu lifunda isiza sakho ku- idivayisi yeselula. Ingabe isayithi lakho lisebenza ngisho nakwiselula? Ingabe ilungiselelwe i-iPhone, i-iPad, i-Droid ne-Blackberry?
Uma ungakakhi okuthile, yeka ukuvusa amabhola abo bonke abantu ngo- ukugxeka abakufezile.
Yeka ukwenza abaklami bakho bewebhu benze izinto zisebenze kuzo I-Internet Explorer 6. Awusekeli nje kuphela isiphequluli esiphukile, esingavikelekile, futhi ubamba iqhaza ekuphuzeni utshwala nasemazingeni okuzibulala.
Yebo, empeleni ngikhona / bengizoba / ngizoba njalo umatasa.
Musa ukunika abantu isikhathi esinzima mayelana nokwenza i-automating futhi ukuhlanganisa okuqukethwe kwabo. Banabasebenzi abangu-3 futhi banabafundi abangama-50,000 XNUMX… banike ikhefu!
Baba, ngicela uyeke ukungithumelela ama-imeyili ohlaka lwangakwesokudla adonswa phansi eminyakeni engu-7 edlule ku Izinyoka. The NSFW izithombe zabesifazane abahle zisalungile, noma kunjalo. Thanda iNdodana Yakho, uDoug.
Uma usasebenzisa popover / popunder amafasitela anokukhangisa, siyaqonda ukuthi uphelelwe yithemba futhi awukwazi ukwenza imali online. Hamba uthengise amabhuku wezingcingo.
Yeka ukungicela ukuba ngibe umngane wakho ku Foursqure lapho ungahlali ezwenikazi elilodwa futhi angikwazi.
Google, ngicela ufake i- API kuma-Webmasters ukuze sikwazi landelela isikhundla sethu kunoma yiliphi igama elingukhiye. Sikwenza noma kunjalo ngamathuluzi esaziyo ukuthi awuthandi. Dlula kuyo.
Akusepholile ukukhipha i-iPhone 4 emhlanganweni. Manje ama-Droids anezinhlelo zokusebenza ezifanayo futhi empeleni angaqedela ucingo. Udinga i- iPad manje ukubukeka upholile emhlanganweni wesidlo sasemini. (Sicela ubheke ku- # 26)
I-Twitter, sicela usivumele ukuthi sibeke izibalo ekhasini lethu nakwethu amakhodi womkhankaso kunoma iziphi izixhumanisi ezingenayo zesethi yezizinda ezinesevisi yakho. Amabhizinisi azokhokha kahle kulokhu ukuze akwazi ukukala i-ROI yangempela kuzo zombili izinhlelo zokusebenza nokudluliselwa kwewebhu kusuka ku-Twitter.
Kubo bonke abathuthukisi be-software. Ngoba cishe yonke into ingakwazi ukuqoqa kabusha kulezi zinsuku, akufanele kusho ukuthi ukhipha inguqulo entsha njalo emahoreni ayi-16.
IMicrosoft: Sicela uvimbele zonke izinkampani ekusebenziseni i-Bing noma iMicrosoft.com kanye nakho konke ukufaka nokuthuthukisa amaphakheji wemikhiqizo ye-Microsoft lapho bengenayo inguqulo yakamuva ye- Internet Explorer egijima. (Ngaphandle kwe- Internet Explorer thuthukisa ikhasi.)
Bonke abathuthukisi bewebhusayithi: Sicela uvimbele zonke izinhlobo ze-Internet Explorer ngaphansi kwenguqulo 8 futhi unikeze ngesixhumanisi lapho bengalanda khona I-Chrome, Firefox, Safari noma i-Opera. Noma yini ingcono.
I-Apple: Yekela ukuzidawula bese ufaka ifayili le- ikhamera ku-iPad vele. Yeka ukusenga ukuthuthukisa ukuthengisa.
Yeka ukubiza abantu online abenza umsebenzi omuhle Rock Stars. Akuwona amaRock Stars.
Isikwele: Noma iyiphi indlela UGowalla usebenzisa ukuthola indawo eseduze, sicela untshontshe umbono. Ngikhathele ukufuna kuhlelo lwakho lokusebenza.
Siyazi ukuthi kubonakala kunengqondo… uthumela i-imeyili e-1 futhi uthola impendulo enhle. Ukusihlasela ngamabhomu ngama-imeyili amaningi angama-26 ngeke kukutholele amahlandla angama-26 izinga lokuphendula. Ngiyakwethembisa.
Yeka ukukhuluma kahle ngombono wakho weminyaka engu-3 ka- ChaCha. Sikwenze kwaba yi indawo ekhula ngokushesha kakhulu ku-inthanethi. Ngaphezu kwalokho uScott nethimba lakhe bangabantu abasebenza kahle kakhulu.
Google: Yeka ukupha -Google Analytics Mahhala. Akekho osayisebenzisa ngokufanele, futhi ubeke phansi imbuyiselo ekutshalweni okungokoqobo analytics inkampani ingahlinzeka.
Uma u babe ukubhalisela umphakathi wakho ukuze uthole ukweseka, bese usho ukukhula komphakathi wakho ekumaketheni kwakho kunikeza umyalezo oxubile. Kepha nikeza umnyango wakho wokukhangisa ukukhulisa noma kunjalo, lokho kuhle kakhulu.
Yeka ukukhuluma kakhulu ngokuthi kukhulu kangakanani ezinye izinkampani benza ngenxa yezinkundla zokuxhumana. Babemuhle ngaphambi kwezokuxhumana!
Akukho ukulungiswa okulula abathengisi. Sinezindlela eziningi zokuxhumana, isikhathi esincane, abathengi bokukhetha, nabaphathi abafuna ngenkani. Yi-marathon hhayi i-sprint. Qalisa ukusebenza uyeke ukufunda le nkinga.
Tags: 2011Izinqumo ze-2011
ukhiye welayisense wezempilo we-pc
Feb 24, 2011 ngo-10: 01 AM
Miningi imicabango ewusizo lapha, ha. Yebo, ngiyazi ukuthi impendulo yami lapha seyephuze lapha kepha ngifuna nazi ukuthi ngijabuliswe yilokhu okuthunyelwe futhi kunginikeza imibono emisha eminingi engizoqala ngayo. Lokho izinqumo ezinkulu ze-inthanethi kulo 2011.